Xildhibaanadii Mooshinka ka gudbiyay madaxweyne Farmaajo oo hadlay-Dhageyso • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Xildhibaanadii Mooshinka ka gudbiyay madaxweyne Farmaajo oo hadlay-Dhageyso
December 9, 2018 - By: Abdirisak Faamoos
Waxaa caawa si rasmi ah usoo shaac baxay mooshin xil ka qaadis ah oo xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ay ka gudbiyeen madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo kadib Shir jiraa’id oo magaalada Muqdisho ay caawa ku yeesheen xildhibaanada mooshinka gudbiyay qaarkood.
Inkastoo aan la ogeyn tirada xildhibaanada mooshinka xil ka qaadista ah ka gudbiyay madaxweyne Farmaajo hadana xildhibaanada caawa shiray waxa ay shirkooda jiraa’id ka sheegeen in ay yihiin tiro xildhibaano ah kuwaas oo dastuurka uu siinayo awood ay xilka uga qaadaan madaxweynaha.
Villa Hargaysa oo ah halka uu caawa ka qabsoomay Shirka jiraa’id ee xildhibaanada ayaa waxaa ku sugnaa tiro aan badnayn oo xildhibaano ah walow ay sheegeen in iyagu ay wakiil ka yihiin xildhibaano ku dhow 80 meeyo kuwaas oo horboodaya mooshinka.
Mar sii horeysay oo maanta ah ayay ahayd markii uu soo shaac baxay mooshinka ka dhanka ah madaxxweynaha Soomaaliya xiligaas oo la sheegayay in warqada mooshinka uu gudoomay Maxamed Mursal Sh Cabdiraxmaan gudoomiyaha Golaha shacabka.
Lama oga halka uu saldhigan doono mooshinkan xil ka qaadista ah ee ay qaar kamid ah xilldhibaanada golaha shacabka ka gudbiyeen madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo hase ahaatee mooshinka ayaa noqonaya dhul gariirkii ugu xumaa ee ay la kulanto dowlada madaxweyne Farmaajo.
Hoos ka dhageyso Shirka Jiraa’id ee xildhibaanada caawa yeesheen